Mpanompo voatendry ho an'ny fanjakana rehetra ao amin'ny fanjakana 50
Ny mpandraharaha iray misoratra anarana dia takian'ny lalàna orinasa iray na orinasa tompon'antoka tsy miankina amin'ny ankapobeny. Ny mpandraharaha voasoratra anarana dia manaiky ireo antontan-taratasy ofisialy ary afaka manampy amin'ny fanomezan-toky fa misy antotan-taratasy sasantsasany napetraka mba hitazonana ilay orinasa amin'ny toerana tsara. Amin'izany, tokony ho hita eo amin'ny adiresy ara-batana voatanisa ao amin'ny rakitsary ampahibemaso ny 9 am andro aman'alina. Companies Incorporated dia manolotra serivisy voatendry ho an'ny fanjakana rehetra ao amin'ny firenena dimampolo sy any amin'ny toerana maro any ampitan-dranomasina. Azafady mba mifandraisa mpiara-miasa iray mba hahafantarana misimisy kokoa momba ity serivisy ity. Ireo mpitsoa-trano ara-dalàna dia takian'ny lalàna amin'ny ankapobeny.
Ny Companies Incorporated dia manolotra serivisy serivisy maimaim-poana amin'ny alàlan'ny fanangonana rakitra ho an'ny taona voalohany.